APICMO Ngalaba anyị na-emepụta ọgwụ maka CMO / CDMO Intermediates
Gọọmenti Team anyị
Onye isi oche & onye isi
Co-onye nchoputa, onyeisi ulo oru ndi isi; PhD natara site na Fudan University na organic onwu. Ihe karịrị afọ itoolu nke ahụmahụ na ngwakọta usoro ọgwụ ọgwụ. Ahụhụ bara ọgaranya na nkà na-arụ ọrụ, nkà mmụta ọgwụ na nhazi omenala na oru ngo.
Co-onye nchoputa, onyeisi ulo oru ndi isi; PhD natara site na Fudan University na organic onwu. Ihe karịrị afọ itoolu nke ahụmahụ na nchịkọta kemịkal na usoro ọgwụ ọjọọ; ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akwụkwọ 10 nke e bipụtara na akwụkwọ akụkọ ndị nwere ikikere, tinyere ihe karịrị ise Chinese patent.
Gụọ ọla kọpa
Ahịa & Mgbasa ozi
E si na Ngalaba Na-ahụ Maka Ọdịdị Na-ahụ Maka Ọdịnihu, Mahadum Stanford, Mahadum Stanford, Ngalaba Na-ahụ Maka onwu na onwu, karịa 15 afọ nke ahụmahụ nke njikọ ọgwụ chemical, enyeere Pfizer Inc aka, maka ọrụ nhazi ahịa nke ụwa ma meela ihe ndị dị ebube.
Ihe karịrị 10 afọ na-arụ ọrụ na mpaghara nke njikọ ọgwụ chemical, arụ ọrụ na GSK, bụ maka maka ahịa na North America, enwetawo ihe dị mma.